နယူးကာဆယ်နဲ့ပွဲက မာစီယဲလ်ရဲ့ ချေပဂိုးဟာ ပေါင်(၈.၇)သန်းအထိ တန်ကြေးရှိတယ်
နယူးကာဆယ်နဲ့ပွဲမှာ မာစီယဲလ် Martial ရဲ့ သွင်းဂိုးက ပေါင်(၈.၇)သန်း တန်ကြေးရှိခဲ့တယ်
11 Oct 2018 . 4:51 PM
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က နယူးကာဆယ်ကို (၃-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာ မန်ယူအသင်းအတွက် ဒုတိယချေပဂိုးသွင်းယူခဲ့တဲ့ မာစီယဲလ် Martial ရဲ့ သွင်းဂိုးအတွက် မန်ယူအသင်းဟာ ပေါင်(၈.၇)သန်း ကုန်ကျတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မာစီယဲလ်ကို ခေါ်ယူခဲ့စဉ်က မိုနာကိုနဲ့ သဘောတူညီထားတဲ့ စာချုပ်အချက်အလက်အရ မန်ယူအသင်းဟာ မိုနာကိုကို ပေါင်(၈.၇)သန်း ပေးချေရမှာပါ။ မန်ယူအသင်းဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က မာစီယဲလ်ကို ပေါင်(၃၈.၅)သန်းနဲ့ ခေါ်ယူခဲ့ပြီး စာချုပ်ထဲမှာ မာစီယဲလ်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အလိုက် ဆုကြေးပေးရမယ့် အချက်(၃)ချက် ပါဝင်ပါတယ်။
ပထမအချက်ကတော့ အခု ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီကုန်မတိုင်ခင် မန်ယူအသင်းအတွက် မာစီယဲလ် ပရီးမီးယားလိဂ်သွင်းဂိုး (၂၅)ဂိုး ပြည့်ခဲ့ရင် မိုနာကိုအသင်းက ပေါင်(၈.၇)သန်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ နယူးကာဆယ်နဲ့ပွဲမှာ မာစီယဲလ်သွင်းခဲ့တဲ့ဂိုးက ပရီးမီးယားလိဂ် (၂၅)ဂိုးမြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် မန်ယူအသင်းဟာ သဘောတူညီချက်အရ ဆုကြေးပေးရတော့မှာပါ။ မာစီယဲလ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်န၀ါရီလက ဘန်လေကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာ မန်ယူအသင်းအတွက် ဂိုးသွင်းပြီးနောက်ပိုင်း ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဂိုးပေါက်ပျောက်နေပြီး (၁၀)လအကြာမှ ဂိုးပေါက်ပြန်တွေ့ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ မာစီယဲလ်ဟာ ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီကုန်မတိုင်ခင် ပြင်သစ်အသင်းအတွက် (၂၅)ပွဲပြည့်မြောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ပေါင်(၈.၇)သန်း၊ Ballon d’Or ဆု ပဏာမစာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ရင် နောက်ထပ် ပေါင်(၈.၇)သန်း ပေးချေရဦးမှာဖြစ်ပေမယ့် မာစီယဲလ်ဟာ Ballon d’Or ဆု စာရင်းမှာ မပါဝင်ခဲ့လို့ အဲဒီအတွက် ပေးစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ပြင်သစ်အသင်းအတွက် (၂၅)ပွဲပြည့်ဖို့က (၇)ပွဲလိုနေသေးပြီး မာစီယဲလ်ဟာလည်း ပြင်သစ်အသင်းမှာ ပုံမှန်ရွေးချယ်ခံရခြင်း မရှိတော့လို့ မန်ယူအသင်း နောက်ထပ် ငွေကုန်စရာ မလိုတော့တဲ့ အခြေအနေပါပဲ။
နယူးကာဆယျနဲ့ပှဲမှာ မာစီယဲလျ Martial ရဲ့ သှငျးဂိုးက ပေါငျ(၈.၇)သနျး တနျကွေးရှိခဲ့တယျ
ပွီးခဲ့တဲ့တဈပတျက နယူးကာဆယျကို (၃-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့တဲ့ပှဲမှာ မနျယူအသငျးအတှကျ ဒုတိယခပြေဂိုးသှငျးယူခဲ့တဲ့ မာစီယဲလျ Martial ရဲ့ သှငျးဂိုးအတှကျ မနျယူအသငျးဟာ ပေါငျ(၈.၇)သနျး ကုနျကတြော့မှာဖွဈပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ မာစီယဲလျကို ချေါယူခဲ့စဉျက မိုနာကိုနဲ့ သဘောတူညီထားတဲ့ စာခြုပျအခကျြအလကျအရ မနျယူအသငျးဟာ မိုနာကိုကို ပေါငျ(၈.၇)သနျး ပေးခရြေမှာပါ။ မနျယူအသငျးဟာ ၂၀၁၅ ခုနှဈက မာစီယဲလျကို ပေါငျ(၃၈.၅)သနျးနဲ့ ချေါယူခဲ့ပွီး စာခြုပျထဲမှာ မာစီယဲလျရဲ့ စှမျးဆောငျရညျအလိုကျ ဆုကွေးပေးရမယျ့ အခကျြ(၃)ခကျြ ပါဝငျပါတယျ။
ပထမအခကျြကတော့ အခု ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီကုနျမတိုငျခငျ မနျယူအသငျးအတှကျ မာစီယဲလျ ပရီးမီးယားလိဂျသှငျးဂိုး (၂၅)ဂိုး ပွညျ့ခဲ့ရငျ မိုနာကိုအသငျးက ပေါငျ(၈.၇)သနျးရရှိမှာဖွဈပါတယျ။ နယူးကာဆယျနဲ့ပှဲမှာ မာစီယဲလျသှငျးခဲ့တဲ့ဂိုးက ပရီးမီးယားလိဂျ (၂၅)ဂိုးမွောကျဖွဈတဲ့အတှကျ မနျယူအသငျးဟာ သဘောတူညီခကျြအရ ဆုကွေးပေးရတော့မှာပါ။ မာစီယဲလျဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ဇနျနဝါရီလက ဘနျလကေို အနိုငျရခဲ့တဲ့ပှဲမှာ မနျယူအသငျးအတှကျ ဂိုးသှငျးပွီးနောကျပိုငျး ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ဂိုးပေါကျပြောကျနပွေီး (၁၀)လအကွာမှ ဂိုးပေါကျပွနျတှခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့ မာစီယဲလျဟာ ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီကုနျမတိုငျခငျ ပွငျသဈအသငျးအတှကျ (၂၅)ပှဲပွညျ့မွောကျခဲ့မယျဆိုရငျ ပေါငျ(၈.၇)သနျး၊ Ballon d’Or ဆု ပဏာမစာရငျးမှာ ပါဝငျခဲ့ရငျ နောကျထပျ ပေါငျ(၈.၇)သနျး ပေးခရြေဦးမှာဖွဈပမေယျ့ မာစီယဲလျဟာ Ballon d’Or ဆု စာရငျးမှာ မပါဝငျခဲ့လို့ အဲဒီအတှကျ ပေးစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ပွငျသဈအသငျးအတှကျ (၂၅)ပှဲပွညျ့ဖို့က (၇)ပှဲလိုနသေေးပွီး မာစီယဲလျဟာလညျး ပွငျသဈအသငျးမှာ ပုံမှနျရှေးခယျြခံရခွငျး မရှိတော့လို့ မနျယူအသငျး နောကျထပျ ငှကေုနျစရာ မလိုတော့တဲ့ အခွအေနပေါပဲ။
by Naing Linn . 46 mins ago